I-Google Adsense Yezifunzo | Martech Zone
I-Google Adsense Yezifunzo
NgoMgqibelo, Agasti 4, 2007 NgeSonto, Agasti 19, 2007 Douglas Karr
Lapho okuphakelayo kuvula futhi kwenza isicelo sesithombe, i-Google ngamandla inikezela isithombe endizeni. Lokhu kufanele kwenziwe ngale ndlela ukuze sikwazi ukulawula isabelomali soMkhangisi. Ngamanye amagama, uma nginesabelomali se- $ 100 - lapho ngisebenzisa leso sabhajethi, enye iqoqo lezikhangiso kufanele linikezwe umuntu olandelayo ovula okuphakelayo.
Into eyodwa yokufuna ukwazi ukukhetha i-Blogger noma Uhlobo Oluhambayo. Kungani kunenkinga ethile epulatifomu ethile? Ingabe kukhona izingqinamba? Kubukeka sengathi lobu buchwepheshe bungadlulela kunoma isiphi isayithi elinikwe amandla i-RSS. Ngokuqondene neGoogle, akuningi kakhulu imininingwane itholakala kusayithi labo.
Ngibheke phambili ukubhalisela i-Adsense for Feeds uma isitholakala. Uma uneminye imininingwane eyengeziwe - sicela unikele ngempendulo kumazwana abekiwe.